Ungabaqondisa njani abaSebenzisi ngokuSebenzisa iNdawo yabo kwiWordPress | Martech Zone
Ungabahambisa njani kwakhona abaSebenzisi ngokuSebenzisa iNdawo yabo kwiWordPress
NgoLwesine, Julayi 26, 2018 Douglas Karr
Ewe kunzima kakhulu kunokuba ungacinga. Nantsi eminye imiba obaleka kuyo:
Dilesi ze IP zihlaziywa ngokuqhubekekayo. Kwaye iziseko zedatha yasimahla ye-GeoIP ineedigri ezinkulu zedatha elahlekileyo ukuze ukuchaneka kube yingxaki enkulu.
Amaphepha angaphakathi kufuneka kujongwane nayo. Kulula ukuqondisa omnye umntu kwiphepha lasekhaya, kodwa kuthekani ukuba bafika kwiphepha langaphakathi? Kuya kufuneka wongeze i-cookie logic ukuze bakwazi ukuhanjiswa kutyelelo lokuqala kwiseshoni, emva koko ubashiye bodwa njengoko bejonga indawo.
Caching iyimfuneko kule mihla kufuneka ube nenkqubo ephatha ichonga umsebenzisi ngamnye. Awufuni ndwendwe lunye olusuka eFlorida luye kwiphepha laseFlorida kwaye zonke iindwendwe emva koko.
izicelo yedatha enomsebenzisi ngamnye kwiphepha ngalinye inokucothisa iserver yakho. Kuya kufuneka ugcine iseshoni nganye yomsebenzisi ukuze ungagcini ujonga ulwazi rhoqo.
Iveki nganye yokusetyenziswa izisa imiba emininzi nangakumbi ndiye ndayeka ndenza uphando. Ngombulelo, inkampani esele ichongiwe kwaye yayikhathalela le micimbi ngenkonzo, Ukujolisa kwindawo yeWP. I-GeotargetingWP yinkonzo enamandla ye-API yokwenza umxholo we-geotarget okanye ukwenza i-geo ejolise kuyo kwi-WordPress. Bakhe iiplagi ezine ezinokusetyenziswa ngokuxhomekeke kwiimfuno zakho:
Inkqubo yeGeotargeting yeyona iplagi iyintandokazi kubathengisi abadibeneyo belizwe labo izibonelelo ezithile ngenxa yokulula kunye neempawu ezinamandla. Ngoku ngokuchaneka kwepremiyamu ukukunceda ujolise kumazwe nakwizixeko umxholo othile.
Ulungelelwaniso ngokutsha lweGeo ithumela abasebenzisi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ngokusekwe kwindawo yabo ngamanyathelo ambalwa alula. Ukuphinda uqondise kwakhona iplagi yeWordPress sisixhobo esinamandla esiya kukuvumela ukuba wenze ngokulula ukuhambisa kwakhona ngokusekwe kwiindlela ezininzi.
Iiflegi zeGeo Isongezo esilula se-plugin ye-Geotargeting Pro eya kukuvumela ukuba ubonise iflegi yelizwe yangoku yomsebenzisi okanye nayiphi na enye iflegi oyifunayo ngokusebenzisa ikhowudi emfutshane efana nale:
[iflegi ye-geo iphindwe kabini = "ubuxoki" ubungakanani = "100px"]
Ibhlokhi yeGeo iplagi yeWordPress izakuvumela ngokulula ukuthintela ukufikelela kubasebenzisi abavela kwiindawo ezithile. Ungabathintela ekufikeleleni kwindawo yakho yonke okanye ukhethe ukuba ngawaphi amaphepha.
Iqonga likwavumela ukuba wakhe kwaye usebenzise imimandla ekujolise kuyo ukuze kungafuneki ukuba wenze imigaqo engapheliyo esekwe kwimimandla emininzi. Ungawaqokelela amazwe okanye iidolophu ukuze wenze kube lula ukujolisa kubasebenzisi. Njengomzekelo, unokwenza ummandla obizwa ngokuba yiYurophu kunye nomnye obizwa ngokuba yiMelika, emva koko usebenzise la magama kwiikhowudi ezimfutshane okanye iiwijethi zokongela ixesha. I-Caching ayisiyongxaki, nokuba yeyiphi. Bafumanisa i-IP yomsebenzisi wokwenyani nokuba usebenzisa i-Cloudflare, i-Sucuri, i-Akamai, i-Ezoic, i-Reblaze, i-Varnish, njl. Njl.
I-API yabo ibonelela ngokuchaneka okuphezulu kwendawo, ilizwe elibuyayo, ilizwe, idatha yedolophu kunye nedolophu. Kuba iindleko zisekwe ekusetyenzisweni, ungaqhagamshela ngqo kwi-API yazo kwaye uyisebenzise ngendlela othanda ngayo.
Qalisa ngeGeotargeting WordPress
Ukubhengezwa: Sisebenzisa ikhonkco lethu lokudibana kule posi kuba siyithanda kakhulu inkonzo!
tags: vimba indawoemzinilizweibhloko geoIplagi ye-geoUkuhanjiswa kwakhona kwendawogeographygeotargetIndawo eqondiswa kwakhonaLumenteUmxholo ekujoliswe kuwoiplagi yamagama
Umanejala wePhulo le-LinkedIn ukhupha amava akhe eNgxelo yePhulo elitsha
Imiceli mngeni yokuThengisa ngokuZenzekelayo yabathengisi, abathengisi, kunye neeCEO (Idatha + yeNgcebiso)